Ny Exynos 880 dia voamarina ho ilay chipset hampiasan'ny Vivo Y70s 5G | Androidsis
Ny Exynos 880 mbola tsy nambara dia manamafy indray fa io no chipset hampiasain'ny Vivo Y70s 5G
Samsung dia mamorona sehatra finday vaovao izay hamely ny tsena amin'ity taona ity toy ny Exynos 880. Andro vitsy lasa izay ity chipset mahery ity dia niseho tao amin'ny tahiry Geekbench tamin'ny maodely Vivo. Tsy niandry ny filazam-baovao fa momba ny Miaina Y70s 5G aho, ny finday voalohany mety hampiasa azy ato ho ato.
Ilay mpanamboatra sinoa, tato ho ato, dia namoaka afisy fampiroboroboana ho an'ity finday avo lenta manaraka ity, izay ilazany mazava tsara, noho izany tsy misy isalasalana fa akaiky tokoa ny daty fandefasana azy ary hambara tsy ho ela. Ity fitaovana ity koa dia manararaotra mampiseho ampahany kely amin'ny telefaona.
Ny fitaovana fampiroboroboana vaovao dia manolotra izany Ny Vivo Y70s 5G dia ho tonga amin'ny loko mavokely mavokely sy manga. Eo anoloana, ny terminal eo anelanelan'ny elanelam-potoana dia misy efijery voaravaka. Ny fisian'ny mpamaky dian-tànana mitaingina sisiny dia manondro tsara fa omena takelaka teknolojia LCD IPS koa izy. Ho fanampin'izany, ny tontonana aoriana ao amin'ny fitaovana dia aseho fa manana rafitra fakan-tsary telo miaraka amin'ny fakan-tsary 48 MP miaraka amina flash LED, batterie 4.500 mAh, RAM 8 GB ary ROM 128 GB, ary ny SoC voalaza etsy ambony.
Voalaza fa izany ny chipset Exynos 880 dia kinova underclocked ny efa fantatra Exynos 980. Midika izany fa izy io dia processeurer izay azo ampiharina mitovy amin'ny famaritana azy, fa miaraka amin'ny toe-javatra famaranana famantaranandro ambany kokoa ao anatin'ny sampahony, noho izany dia hampiseho fahombiazan'ny hafainganam-pandeha ambany kokoa izy. Na izany aza, mbola tsy misy ofisialy momba an'io, ka tokony hotandremana izany mandra-pitenin'i Samsung zavatra mivaingana.
Ity tsaho ity dia mifototra amin'ny fitsapana izay navoakan'i Geekbench teo aloha, izay nanehoana ny Vivo miaraka amin'ny kaody modely V2002A, izay voalaza fa io finday io ihany koa niaraka tamin'ny Exynos 880. Toy izany koa, ilay tsaho izay voamarina fa marina amin'ireto afisy ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Exynos 880 mbola tsy nambara dia manamafy indray fa io no chipset hampiasain'ny Vivo Y70s 5G
Ny Pixel 4a dia tara amin'ny famotsorana azy amin'ny 13 Jolay
Ny Honor X10 no finday 5G vaovao natomboka niaraka tamin'i Kirin 820: fantaro ny fiasa, ny vidiny, ny fahafahany ary maro hafa